Gannett choro isi na isi ya | Martech Zone
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 12, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Onye ọ bụla nụrụ banyere okwu a na-enwe isi gị n'isi. na Gannett, ha emewo ka okwu a pụta ìhè, n'agbanyeghị. Ruth Holladay bụ onye na-ede blọgụ na-ekwu okwu ọjọọ nke nwere ire nkọ… ọ nwụrụ-na, ọkachasị mgbe ọ dị abịa Gannett na Indianapolis Star.
Anyị abụọ na-arụ ọrụ ebe ahụ, Ruth lara ezumike nká na mụ na ndị nnọchi anya ya mgbe Gannett wetara onye VP bụ onye kpochapụrụ otu ngalaba ikike.
Gannett Maka Ire?
Asịrị ndị na-adịbeghị anya bụ na Gannett nwere ike ịkwadebe maka ire ere n'oge na-adịghị anya. Achọghị m ịma. Erere m ngwongwo m ozugbo m lara, na-achọpụta na ọpụpụ m bụ ihe mgbaàmà ọzọ Monsterus Corporititus, bụkwa nke a maara dị ka na-enwe isi gị n'isi.
Mbụ ụfọdụ - arụrụ m ọrụ maka ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ abụọ - Landmark na Gannett. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ abụọ ahụ yiri nke ha na ụlọ ọrụ, ha enweghị ike ịdị iche na njikwa. Mgbe Landmark kwenyere na nnwere onwe ya maka ihe onwunwe ya na ndị njikwa ya, Gannett kwenyere na njikwa.
Dị ka Ahịa Ahịa na akwụkwọ akụkọ Gannett, enwere m asọmpi na mpaghara mpaghara na ụlọ ọrụ. Ọ bụghị n'èzí ka m nwere mmekọrịta dị ukwuu na ụlọ ọrụ - mana nke bụ eziokwu bụ na ka ha wee nwee ihe ịga nke ọma, ha ga-achụpụ m n'ahịa. Ka ụlọ ọrụ nwere ike igosipụta uru ọ bara site na ịmepụta atụmatụ ụlọ ọrụ, ndị ọrụ ha nwere ike iwepụ na akwụkwọ akụkọ mpaghara. Ihe ha ji akpata ego, ụgwọ ọrụ ha na-akwalite na nkwalite ha dabeere na ya. Yabụ, ọ bụ ezie na enwere m ike ịnwekwu ahụmịhe ma bụrụkwa onye na - eme nke ọma karịa - ụdị ozi ahụ ga-adalata na McLean, Virginia.
Gannett na-eme nke a na ngalaba niile, na-enyochakarị na Editorial. Otu uru asọmpi kachasị na akwụkwọ akụkọ ọ bụla nwere na andntanetị na ihe mgbasa ozi ndị ọzọ bụ ikike mpaghara ya. Ndị a bụ ndị mepụtara mmekọrịta na obodo ma mara ebe ọgbaghara na nchegbu dị mgbe a bịara n’usoro ọchịchị anyị. Ọ bụkwa ngalaba ahụ yiri ka ọ na-achụ ọtụtụ ihe n'àjà. Ndị m bụ ndị enyi na Editorial na-arụ ọrụ ha na ehihie na abalị na ọtụtụ ọkwa na-emeghe ndị na-agaghị eju afọ. Ọtụtụ n'ime ha na-arahụ ugbu a… a oké mfu nke obodo a.
Ọ dị mfe ịhụ ebe uru bara uru:
Indianapolis Star ugbu a bụ ngwakọta nke AP na mgbasa ozi na ịgbasa akụkọ mpaghara n'etiti. Ndị ọkachamara n’ichepụta ihe n’ụlọ ọrụ ga-agwa gị na mbelata ndị a adịla mkpa n’ihi na ndị mmadụ na-eche ihu na Weebụ maka ozi na ozi ha.
Enweghị m ike ịkọpụta ụdị iwe iwe nke a na-ewe m. Ọ dịka ịta Toyota ụta maka ire ahịa na ahịa ụgbọ ala. Ndị ọrụ Gannett Corporate enweghị onye ọ ga-ata ụta ma onwe ha. Ha nwere ohere iji mee ka nguzo ha siri ike na obodo wee leverage ya maka mgbasa ozi na nchịkọta akụkọ. Kama nke ahụ ha mere ịhapụ akwụkwọ akụkọ mpaghara ka ụlọ ọrụ kwụsị ọrụ.
Otu anya na Indianapolis Star na Gannett ga-enye ihe akaebe doro anya nke otu esi arụ ọrụ.
Ọ bụ ezie na Gannett meriri akara na otu n'ime ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ kachasị dị egwu na mba ahụ, enwere ike ịhọrọ Indianapolis Star otu n'ime ndị kasị njọ n'obodo ahụ. M ga-arụ ọrụ na ụlọ agbakwunyere, American Building… nke a nụrụ kepu kepu na ọ bụ onye bi na mpụga ala ala mbụ. Aghọtara m na nke a abụghị na nke, ọ bụ naanị nnukwu ọhụụ nke ya.
Ọ na-egosi na oke uru na-akwagide site na ntufu na mgbasa. Mpaghara, kpakpando ahụ na-agbakwunye ya na nchịkọta akụkọ ya foto na blọgụ site n'aka ndị na-agụ ya. Ezie na m na-ekwetaghị na nke a bụ nnukwu azụmahịa mkpebi, ọ bụ ihe nwute ahụ ego a na-akpali ndị ụlọ ọrụ kama a ga-etinye na mpaghara talent.
IndyMoms: Ọganihu nke Obodo
Ndi IndomMm bụ ihe atụ nke otu esi eme ihe ziri ezi. IndyMoms 'General Manager bu Jennifer Gombach, nwanyị nwere nkà na-enwe obi ụtọ na m ga-arụ ọrụ na The Star.
Jennifer abughi nani onye ahia ahia, onye edemede na onye ọchụnta ego, ọ bụkwa onye obodo ma nọrọ na akwụkwọ akụkọ ruo ogologo oge (a na-elegharakarị ya anya). Ọ ga-amasị m ịhụ ohere ịrụ ọrụ n'okpuru Jennifer mgbe m nọ ebe ahụ. Ọ bụ ezigbo onye ndụmọdụ na ezigbo enyi.
Ihe Gannett kwesiri ime
Ọ bụrụ na Gannett chọrọ n'ezie ime ya, ndị layoffs kwesịrị ịmalite na ndị ọrụ ụlọ ọrụ ha. Aga m arịọ ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m mgbaghara tupu oge eruo, mana ọ bụ ebe nsogbu gị dị.
Nye mpaghara akwụkwọ akụkọ obodo gị nnwere onwe ha chọrọ ịkwado azụmaahịa ahụ. Kwe ka ha tinye ego ha n’achụmnta ego ha mana ha zaa ajụjụ. Ulo oru kwesiri igbutu oke uru ha huru n'anya n'isi ulo oru ma o di nkpa. Bido ịkwalite site na akwụkwọ akụkọ kama ịgbanye talent na mba niile.
Lelee ihe Jennifer mere na IndyMoms. Ọ bụ mpaghara, ọ bụ nke ya, ọ dịkwa mma. Ha ejikọtara ya na ndị na - agụ akwụkwọ ma nye ha usoro zuru oke maka ndị mgbasa ozi mpaghara iji jikọọ na igwe mmadụ. Ọ bụ uzommeputa zuru oke maka ịga nke ọma ma enwere ike ịmeghachi ya ọtụtụ ugboro.
Gannett kwesịrị isi na isi ya pụọ. Fọdụ ndị folks na-ekwu Ndọrọ ndọrọ ọchịchị niile bụ nke obodo! Na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ, Dollar niile bu obodo! Agaghị m ejide ume m na-eche ka Gannett gbaa onwe ya ọkụ, agbanyeghị.